Sabotsy 21 Novambra 2020. – FJKM
Lehilahy tonga amin’ny fiderana an’Andriamanitra
Lehilahy nobataina isanandro mba hangataka no tonga nidera an’ Andriamanitra tao amin’ny Fiangonana , rehefa avy novonjen’i Jesoa tamin’ny alalan’ny Apostoly . Miezaha manokana koa ianao hanampy ny hafa ka :
1-Mba jereo izay mila vonjy (and 3,4)
« Ary i Petera sy Jaona nibanjina azy » . Nijery ity lehilahy ity Petera sy Jaona mialohann’y nidirany tao amin’ny Tempoly . Mampianatra antsika Lioka eto amin’izao perikopa izao mba hijery ireo izay tena mila vonjy . Alohan’ny hihaonana amin’ny Tompo dia zava-dehibe ny mahita ireo izay tena mila famonjena . Aza dia ho mana-maso nefa minia tsy mijery e!
2-Mba omeo izay ananana (and 6)
« Fa izay ananako no omeko anao » . Eoa anatrehan’ny mila vonjy , tsy mitaky antsika hamorona ny tsy misy ny Soratra Masina . Izay ananana azo omena no aolotra ho enti-mamonjy ny hafa . Raha ny marina dia mila antsika malala-tànana ny Tompo . Mila antsika manana fo onena sy vonona hamonjy ireo izay mila izany tokoa . Jesoa no zavatra tsara sy sarobidy indrindra azontsika omena ny olona rehetra .
3-Mba atoroy izay malemy (and7)
« Ary noraisiny tamin’ny tànany ankavanana ralehilahy ka natsangany « . Raha niteny i Petera , tsy avy hatrany akory ilay lehilahy dia nitsangana fa mbola tsy maintsy noraisiny izy , ary najorony ka afaka nitsangana tsara . Mila fiezahana manokana avy amintsika ny hafa vao mba ho afa-mijoro tsara , miala amin’izay mampalemy azy . Koa aoka hanana toepanahy vonona hanampy azy ireny hatramin’ny farany isika .
Inona no mety mahatonga ireny olona nampiantsika ireny tsy tonga amin’ny fiangonana midera an’Andriamanitra ?